Sida loo rakib Android hurdiga ah in Nexus 7, Nexus 5, Nexus 4 iyo More
> Resource > Android > Sida loo rakib Android hurdiga ah ee Phones iyo murriyado
Google ayaa sii daayay Android 5.0 - hurdiga ah. Oo sahan aynu samaynay muujinaysa in in ka badan 94% ka mid ah dadka la doonayo in loo soo dajiyo Android 5.0 taleefannadooda iyo kiniiniyada. Inta badan waxay rabtaa inaad baadhis ku hurdiga ah, ka dib oo dhan, waa brand OS cusub ee telefoonada Android iyo kiniiniyada. Si kastaba ha ahaatee, ma aha in ay fududahay in la casriyeeyo Android 5.0 ama rakibi Android 5.0 on your Phones iyo kiniiniyada. Ka hor inta samayn, aad leedahay qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay in aad bixiso si fiiro:
Qaybta 1. Hubi in qalabka Android aad si rasmi ah loo ogol yahay si loo soo dajiyo Android 5.0 ama ma
Qaybta 2. Sida loo cusboonaysii si ay Android 5.0 la Ota rasmi
Qaybta 3. Sida loo rakib Android 5.0 hurdiga ah in Taxanaha Nexus Gacanta
Qaybta 4. Sida loo Flash Android 5.0 ROM in qalab Android aad
Waxay arrintu u muuqataa inay aad u adag si loo casriyeeyo si ay Android hurdiga ah, sax? Ha welwelin. Waxaad fahmi karaa meesha aad joogto iyo waxa u maleeyeen tahay inaad sameyso by reading faahfaahinta soo socda.
Qaybta 1. Liiska qalabka rasmi ah u xaqiijisay in la cusboonaysiiyaa karaan si ay Android 5.0
1. dusha qalabka ka Google: Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 10 iyo Google Play qalabka edition
Horumarinta la Nexus 5 ama Nexus 7 ayaa u helaan si ay Android hurdiga ah tan iyo bishii June 26. Sida inta kale ee isticmaala, waxaa war fiican ah in Android hurdiga ah waa hore u diyaar u ah Nexus 4, Nexus 5, iyo Nexus 7. ​​Oo Ota diyaar u noqon doona Nexus 10 wax yar. Haddii aadan helin ee Andoid 5.0 update Ota aallada Nexus aad oo aadan rabin in la sugo, waxaad si toos ah kala soo bixi kartaa image warshad ka Google hadda.
2. Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4, Galaxy Alpha, iyo Fiiro Galaxy 3
Samsung Galaxy S5 noqon doonaa qalab ugu horeysay ka Samsung si aad u hesho update Android 5.0. Samsung Galaxy Note 4 ayaa la sii daayey goor hore in aan bilowno la Android hurdiga ah, laakiin waxaa jiri doona update ah iyo sidoo kale. Waxaa la sheegay in Galaxy Alpha iyo Fiiro Galaxy 3 aad heli doontaa update ah.
3. HTC Mid ka mid ah (M8) iyo HTC Mid ka mid ah (M7)
HTC rasmi ah u xaqiijisay in ay bilaabi doonaan in ay HTC uu diidanaa soo baxay updates Mid ka mid ah qoyska worldwidely 90 maalmood ka dib markaad hesho software final ka Google gudahood. Ka sokow ku xusan 2 qalabka, inay aad u badan tahay in HTC damcin Eye, HTC Mid ka mid ah Mini 2, HTC Mid ka mid ah Mini iyo laga yaabee HTC Mid ka mid ah Max aad ka heli doontaa update ah.
4. Moto X Edition daahir ah iyo labaad-g Moto G
Motorola ayaa xaqiijiyay in ay jiri doonaan update ah u Moto X Edition daahir ah iyo labaad-g Moto G. Waxaa weli hadda waa in processing.
Qalab ugu horreeya ee ka socda si aad u hesho Android 5.0 update yahay G3 LG. Saaraha ayaa ku dhawaaqday in dadka isticmaala LG3 ee Poland noqon doonaa kii ugu horeeyay ee ka soo dejisan ee Android 5.0 - hurdiga ah.
6. Sony Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR, Xperia Tablet Z, Xperia Z1, Xperia Z1S, Xperia Z Ultra, Xperia Z1 Compact, Xperia Z2, Xperia Z2 Tablet, Xperia Z3, Xperia Z3v, Xperia Z3 Compact iyo Xperia Z3 Tablet Compact
Sony ayaa shaaca ka qaaday in ay sii daayo Android 5.0 update ee taxanaha Xperia Z.
Waxaa jiri doona Android 5.0 updates ee qalabka kor ku xusan. Haddii qalab aad ku jiraa liiska, waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sugto Ota rasmiga ah. Waxay qaadataa Noqdo 1, 2 ama 3 bilood update ka soo gaaray ku xiran saaraha. My jeedin aad u waa in ay sugto update rasmiga ah ee Android 5.0. goorta la heli karo, waxaad samayn kartaa cusboonaynta in Android 5.0 si fudud . Haddii aad ku adkeyso rakibidda Android 5.0 on qalab aad ka hor Ota rasmi yimaado, sida kaliya ee waa in la iftiimiyo Android 5.0 ROM .
Waxeey jecel inay tijaabiso Android hurdiga ah, oo kaliya si aad u ogaato in aad soo saaraha ma laha qorshe kasta in ay sii daayaan Android 5.0 update Ota u qalab aad? Habka keliya ee aad u soo dajiyo Android hurdiga ah waa in la iftiimiyo Android 5.0 ROM.
Qaybta 2. Sida loo cusboonaysii si ay Android 5.0 iyadoo si rasmi ah Ota
Haddii Android 5.0 gaaray, waxaa fariin Ota ah ee aad taleefan ama kiniin ah, isagoo u sheegay jiro doonaa update ah. Hadda, update Android OTAs hurdiga ah ayaa diyaar u ah Moto X Edition daahir ah, labaad-g Moto G, Nexus 7 (Wi-Fi iyo Mobile version), Nexus 9 (Wi-Fi), Nexus 5 (GSM / LTE) iyo Nexus 10 . Haddii aad aragtay fariin Ota ee Android 5.0 hurdiga ah ee qalab aad, aad raaci karaan tallaabooyinka fudud ee hoose si ay u rakibi.
Tallaabada 1. kaabta qalab aad. Guuleysatey qalab aad iyo soo galaan hab dib u soo kabashada, hoos u qaban button Power iyo mugga. Raadi kaabta ama qaybta Nandroid si loo xaqiijiyo gurmad ah.
Tallaabada 2. Hubi in aad Wi-Fi ama xogta gacanta ah mid deggan.
Tallaabada 3.Click update ama rakibi badhanka si ay u soo bixi xirmo rakibo ah ee aad taleefan oo raac dardar ah si loo soo dajiyo Android 5.0 on qalab aad.
Qaybta 3. Sida loo rakib Android 5.0 hurdiga ah in Phones Nexus iyo Tablet Gacanta
Dadka qaarkood ayaa sheegay in inkastoo ay qalab Nexus waa in liiska in la cusbooneysiin doonaa si ay Android Lollipo, iyagu ma ay heshay Ota weli. Ha welwelin! Haddii aad run ahaantii ma sugi karo si loo soo dajiyo Android hurdiga ah ee aad Nexus telefoonka ama kiniin ah, isku day in talaabooyinka soo socda.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Root Nexus Qalabka on your computer. Waxa kaliya ee ka shaqeeya PC Windows. Haddii aad qabto Mac ah, fadlan isku day in aad u isticmaali ee dalwaddii Windows PC. Fadlan la soco in qalab wax kama jiraan laga yaabaa in aad damaanad. Haddii you'r ka walwalsan tahay in, markaas waa in aad sugto kaliya ee rasmiga ah ee Ota ku xusan Qeybta 2.
Tallaabada 2. Settings tuubada> About Phone qalabka Nexus aad. Under tirada Dhis, qalab aad ka heli dhiso Oo waxaad u xusuusan.
Tallaabada 3. Tubada Settings> About Phone> guji dhis Number u tayeysan Developer. In fursadaha hab Developer, awood debugging USB. Kaliya by suuragelinayo debugging USB, qalab Nexus aad la ogaan doonaa Root Nexus u Qalabka.
Tallaabada 4. Isku qalab Nexus aad la your computer via ay cable digital. Launch Qalabka Nexus Root dooro qalabka aad isticmaalayso, waana wax dhista hadda. Marka qalab wuxuu isku dayaa in ay ku xidhmaan qalab aad, waxaa jiri doona a pop-up aad telefoon. Waa in aad u ogolaato xiriir. Haddii qalab ma garan karaan telefoonka, weeyna ahayd inaad riix Guide Rakibaadda Driver Full on xidhmo ah si loo soo dajiyo wadayaasha software.
Tallaabada 5. In Root Nexus u Qalabka, riix badhanka Unlock ah> OK> Haa. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, qalab aad reboot doonaa.
Tallaabada 6. qalab Nexus aad, guji Settings> dhis lambarka si ay awood Developer Mode dooro debugging USB.
Tallaabada 7. Tag Google goobta offcial in file 5.0 warshad image ka ​​soo bixi . Fadlan dooro file saxda image inaad kala soo baxdo sida ay model qalab aad. File image aad drive hoose badbaadi.
Tallaabada 8. In Root Nexus u Qalabka, guji Flash Stock + Unroot. In si deg deg ah file image aad soo bixi in tallaabo 7 ay doortaan, nuqul oo la soo dhaafay tirada MD5 dalbatay taasoo soo socda file image aad soo bixi goobta rasmiga ah ee Google si ay u.
Tallaabada 9. Sug rebooting telefoonka aad. Taasi waa!
Dadka isticmaala kaasoo aan weligiis ka soo saaraha heli doonaa Android 5.0 update, biligleynaya Android 5.0 ROM in qalabka waa jidka keliya. Nasiib darro, 3 Lahjadaha ee Android 5.0 ROMS hurdiga waxaa uun loo heli karo Nexus 5 hadda. Milkiilayaasha kale qalab u leeyihiin in ay sugto ROMS ugu iman. Hoos waxaa ku qoran faahfaahin u iftiimiyo Android 5.0 ROM ee Nexus 5.
Hubi in 80% ka mid ah Nexus mas'uul 5 batari
Xogta kaabta iyo goobaha la qalab, sida ClockworkMode ama TWRP.
Hubi in aad telefoon la xiran kartaa adiga oo computer si guul leh cable USB ay;
Hubi Nexus 5 habaysan la soo kabashada TWRP rakibay oo ay bootloader waxaa quful.
Wixii tallaabooyinka u iftiimiyo ah Android 5.0 ROM ee Nexus, fadlan hubi hagaha >>